OGAAD: Habka cusub ee ilaalinta nibiriga
Inicio/Ciencia/Waxay horumariyaan hab cusub oo ah ilaalinta nibiriga
CienciaSirdhaad dabiici ah
2 2.984 1 daqiiqo akhri
Koox saynisyahano ah oo ka kala socda wadamada Granada iyo Almería ayaa ku guulaystay inay soo saaraan nidaam ku saleysan sirdoonka macmalka ah ee aqoonsiga iyo kormeerka nibiriyada badda oo dhan si loo gaaro ujeedada ah in si wanaagsan loo ilaaliyo naasleyda.
Qaabku wuxuu ku jiraa codsashada sirdoon macmal ah (IA) xalinta dhibaatooyinka la xiriira ilaalinta nibiriga, marka lagu daro kala duwanaanshaha noolaha.
Sidee farsamadan u shaqaysaa?
Nidaamkan waxaa xukuma farsamo gaar ah oo la yiraahdo barashada qoto dheer wuxuuna ku saleysan yahay algorithms taxane ah oo adeegsada shabakadaha neerfaha ee sida qoto dheer u qoto dheer. Taxanahan algorithms iyo neerfaha macmalka ah waxay leeyihiin waxqabad aad u la mid ah waxa kiliyaha muuqaalka bini'aadamka, sidaas darteed, waxay ka dhigan tahay in awood weyn oo si otomaatig ah loo barto loona kala sooco walxaha kala duwan ee tiro badan oo sawirro leh kaas oo markaa sameeya saadaalin dhab ah oo ku saabsan kuwa cusub oo sidaas darteed, dib ugu quudiya macluumaadka ay soo saaraan.
Codsigan ayaa ah, sida laga soo xigtay Mu'asasada Andalusian ee shaacinta iyo hal-abuurka iyo aqoonta, in badan oo ka waxtar badan oo ka dhaqaale badan qaabab kale oo badan oo hadda shaqeynaya, maxaa intaas ka badan, waxaa lagu heli karaa lacag la'aan kuwa xiiseynaya keydinta ah ilaalinta kooxaha waaweyn.
Lakabyada shabakadaha neerfaha ee qunyar-socodka ah ayaa si otomaatig ah u shaqeynaya astaamo aad u adag, oo keenaya kororka ku jira macluumaadka macluumaadkooda ay ku shaqeyn karto. Gabagabadii, tani waxay si otomaatig ah u yareynaysaa dhibaatada nidaamyada kale ee ku lug leh horumarinteeda. Intaas waxaa sii dheer, codsigu wuxuu ka bilaabmayaa goob uu ku leeyahay xog hore, iyo marka la rarayo sawirro taxane ah oo ay ku muujineyso walxaha ay rabaan inay aqoonsadaan nidaamkuna wuxuu soo saaraa waxbarasho cusub oo lagu soo saaro xogta cusub ee la soo saaray.
Xaqiiqdii, bini aadamku waa sababta ugu weyn ee halista ay kooxaha waaweyn ee badaha u ordaan; sidaa darteed ilaalinta nibiriyada ayaa lagama maarmaan u ah dheelitirka badda.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso: Meeraha Jupiter kuma wareegto qorraxdayada
Heesta nibiriga ayaa lagu qabtay kaamirada:
barasho qoto dheer nibiriga heesaya video nibiriga heesta video nibiriga Nibiriyada heesta nibiriga nibiriyada heesta video Ciencia ilaalinta nibiriga badda weyn Sirdhaad dabiici ah ilaalinta nibiriga video nibiriga
Muraayadaha muraayadaha oo ah qoraxda qorraxda oo kululaada gurigaaga bilaash xilliga qaboobaha
qiimayaasha qiimaha biyaha jilciya 5600 isagu wuxuu leeyahay:
Abriil 6, 2020 markay tahay 8:18 am
Blog nadiif ah! Mawduucaagu ma caado baa laga dhigay mise meel kale ayaad ka soo dejisay?
Mawduuc sidaada oo kale ah oo yar oo tweeks ah ayaa runtii iga dhigi lahaa kan
blog taagan. Fadlan ii sheeg meesha aad ka heshay mawduucaaga.
Ogast 18, 2020 markay tahay 2:42 pm
Waxaan u adeegsannaa qaabka Jannah. Waxaan rajeynayaa inay kuu shaqeyso.